18-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 10-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 8-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 18 ဂဏန်းကုဒ် EM ကဒ်, 10 ဂဏန်းကုဒ် EM ကဒ်, 8 ဂဏန်းကုဒ် EM ကဒ်, 18-bits ကုဒ် EM ကဒ်, 10-bits ကုဒ် EM ကဒ်, 8-bits ကုဒ် EM ကဒ်
18-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 10-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 8-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်
EM ကဒ် / LF Card ကို 10-bits ကုဒ် EM ကဒ်, 10-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 10bits သည်အရေအတွက်အား EM ကဒ်, 18 ဂဏန်းကုဒ် EM ကဒ်, 18-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 18bits သည်အရေအတွက်အား EM ကဒ်, 8-bits ကုဒ် EM ကဒ်, 8-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 8bits သည်အရေအတွက်အား EM ကဒ်
EM ID ကိုကဒ် optional ကို encoding က formats အမျိုးမျိုးနဲ့, access ကိုထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဝိသေသလက္ခဏာစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလွယ်ကူချောမွေ့.
chip: EM4100, EM4102 သို့မဟုတ်ယင်း၏ 64Bit သဟဇာတ chip ကို TK4100, စသည်တို့ကို
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ: PVC, ကို ABS, ပေ, PETG, စက္ကူ
ရှုထောင့်: ထူးအိမ်သင်ကတ်များ 85,5 × 54 × 0.88mm
အထူကတ်များ 85,5 × 54 × 1.80mm
encapsulation တွေကိုသေချာမှုလုပ်ငန်းစဉ်: လမိုင်း, Self-ကော်, ultrasonic encapsulation တွေကိုသေချာ
အဆိုပါ 18 ဂဏန်းကုဒ် / 10 ဂဏန်းကုဒ် / 8 ဂဏန်းကုဒ် EM ကဒ်မန်ချက်စတာ Encoding mode ကိုဖြစ်ပါတယ်, EM အမျိုးအစား 125KHz ID ကိုကတ်များ. အများအားဖြင့် EM4102 သို့မဟုတ် TK4100 chip ကိုအသုံးပွုရ, တစ်ဦးအဆင်ပြေပြေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ရှိပါတယ်, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့, အများဆုံးအသုံးပြု RFID ကတ်များ.
EM chip ကို ID ကိုကဒ်တစ်ဦးတည်းသာပြည်တွင်း Code ကိုအဲဒီမှာဖြစ်ပါတယ်, output ကိုအပေါ်ပြောင်းလဲခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်, တဦးတည်းအမည်ရ 10bits ကူးပြောင်းနေသည် 16 hexadecimal 4bits, အဆိုပါ 10bits ID ကိုကတ်များ coded ဖြစ်ပါတယ်. တဦးတည်း 8bits ကူးပြောင်းနေသည်, အမည်ရ piecewise အသွင်ပြောင်း, ဒီပြောင်းလဲခြင်း၏ဘုံအသုံးပြုမှုအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါ 8bits ID ကိုကဒ် coded ဖြစ်ပါတယ်. 18-bits coded ID ကိုကတ်များ, အထက်ပါနှစ်ခုအမျိုးအစားနံပါတ်များအားလုံးကဒ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်နေကြတယ်, ကုဒ်သွင်း 10bits များ၏ရှေ့မှောက်၌, ကုဒ်သွင်း 8bits အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်.
ID ကိုကတ်များ, လည်းခေါ်: EM ကတ်များ.
ဂဏန်း: ၏မျက်နှာပြင် 18 ID ကိုကဒ်အရေအတွက်က, ID ကိုသူ့ဟာသူနံပါတ်စဉ်, ပထမဆုံး 10 Aba ကုဒ်, ပြီးခဲ့သည့် 8-bit နဲ့ Wiegand ကုဒ်.
ID ကိုကဒ်ကို double-တဖက်သတ်ပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ်, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ် / offset ပုံနှိပ်လိုဂို, ဓာတ်ပုံများ, ရုပ်ပုံ, စာသားမ, စသည်တို့ကို. အထူကတ်များပတ်ပတ်လည်ကွိုင်ကဒ်နှင့်စတုရန်းကွိုင်ကဒ်ရှိပါတယ်, နှင့်တွင်းရှည်ချွတ်လည်းမရှိ, လည်ပင်းမှာရှိတဲ့နိုင်လွန် lanyard ကာစရာကုလားကာဆွဲထားဖို့အသုံးပြု, အဓိကအားဖြင့်အချိန်တက်ရောက်သူကဒ်နှင့်ဝန်ထမ်းကဒ်အဖြစ်အသုံးပြု.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် 18bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, 10-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 8-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်
prev: ကားရပ်နားကွင်းကို Long-အကွာအဝေး ID ကိုကတ်
နောက်တစ်ခု: လုံးဝဆက်တိုက်နံပါတ် EM Card ကို, စဉ်ဆက်မပြတ် Serial Wiegand Code ကို ID ကိုကတ်